Home Somali News Somaliland: Madaxweyne Silaanyo oo la Kulmay Diplomacy ka Socda Safaaradda USA ee...
Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland mudane Axmed Maxamed Silaanyo waxa uu xafiiskiisa ku qaabiley wefti uu hogaaminaayo Diplomacy ka socda safaaradda maraykanku ku leeyahay dalka Kenya xafiiskiisa u qaabilsan Somaliland iyo Soomaaliya, Mr. Brain H. Phipps.
Waxaana kulankan madaxweynaha ku wehelinaayey Wasiirka Qorshaynta Qaranka, Wasiirka Madaxtooyada, Wasiirka Maaliyada, wasiirka Gaashaandhiga, wasiirka waxbarashada, Wasiirka Macdanta iyo Tamarta, wasiir ku xigeenka Arrimaha dibeda, iyo Xoghayaha gaarka ah ee madaxweynaha JSL.
Wasiir Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa faahfaahiyay arrimaha laga wada hadlay “Waxay nagala hadleen uun Arrimaha doorashada iyo sidii si qiimo leh loogu qaban lahaa, la iskuna fahmi lahaa. Sidoo kale waxay nagala hadleen arrimaha amaanka iyo sidii ay inooga caawin lahaayeen culayska Yemen ka soo kordhay. Sidoo kale sidii horumarka la iskaga kaashan lahaa ayaanu ka wada hadalnay”
Mr. Brain ayaa isna halkaasi ka hadlay waxaanu ugu horayn sheegay inuu ka mahadcelinayo soo dhawaynta Xukumadda. Waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin inay Somaliland ka taageeraan Coladda Yemen ee horaantii Qaxoontigu Somaliland soo gaadhay.
Waxa uu sidoo kale sheegay inay Somaliland ka taageeraan Doorashada sidoo kalena jecel yihiin inay ka sii taageeraan “Waxaanu Somaliland si xooggan ugu taageernaa Doorasho Wakhti Macquul ah ku qabsoonta oo xor iyo xalaal ah. Somaliland waxay hirgalinta Dimuqraadiyadda wadday tobanaan sanno, waxay hirgalisay Hay’addaha Dimuqraadiyadda, waxaanuna ku taageeraynaa in la sii horumariyo Mustaqbalka, waxaanuna maanta yeelanay kulan iyo wada hadal aad u wanaagsan” ayuu yidhi Mr. Brain
Mr. Brain H. Phipps
USA kenya Embassy
Somaliland: Kulmiye wants election in time, reiterating the President’s pledge
China: Beijing oo mamnuucday in sigaar lagu cabo goobaha fagaarayaasha ah